Sannad-biyoodka 2017 wuxuu ku egyahay hoos u dhac 15% | Saadaasha Shabakadda
Sannad-biyoodka 2017 wuxuu ku xirmayaa hoos u dhac 15%
Spain waxay la ildaran tahay abaar aad u daran oo xitaa tobankii sano ee la soo dhaafay aysan jirin qiimayaas aad u hooseeya oo roob iyo heerar kayd ahba leh. Biyo yaraanta sanadkan wuxuu ku xirmayaa 15% ka yar sanadkii hore. Waxaa loo tixgeliyey inay tahay xilli aad u qalalan Spain oo dhan, iyadoo ahayd sanadkii siddeedaad iyadoo roobku ugu yaraa tan iyo 1981.
Sidaan ognahay, wareegga biyaha ayaa xirmaya bisha Sebtembar sida ku xusan saadaasha hawadana dayrta waxay noqon doontaa mid aad u kulul oo qalalan, iyadoo roob yar la heli doono. Maxaa lagu qaban karaa xaalada abaarta noocaas ah?
1 Sannad biyo qallalan
2 Biyo yaraan iyo abaar
Sannad biyo qallalan
Muddadani waxay bilaabatay Oktoobar 2016 iyada oo bil ay roobabku ka hooseeyaan qiyamka caadiga ah, waxayna ku sii socdeen bishii Nofember oo qoyan. Dhamaadkii Nofeembar, iyadoo roobabkii da'een, xogta roobka waxay ku noqdeen xaaladdiisii ​​caadiga ahayd. Si kastaba ha noqotee, xogtan waxaa sabab u ahaa dhacdooyin roobab culus oo uusan ku faafin bisha oo dhan.
Laakiin markaa tirooyinku way dhaceen, in kasta oo roobab xoog badani ka da'een koonfurta-bari ee jasiiradda iyo jasiiradaha Balearic intii lagu jiray bilaha Disembar iyo Jannaayo, Jannaayo sidoo kale waxay ahayd bil qalalan oo roobabkii urursanaa ee sannadka biyo-biyoodka ayaa sii waday inay yaraadaan. ilaa 18% ka hooseeya qiimaha caadiga ah qeybtii labaad ee Janaayo.
Bilaha Febraayo iyo Maarso waxay ahaayeen kuwo xasillan amaba ka deggan, una dhow xogta caadiga ah, laakiin bilahaas kadib, gu'gu aad buu u qallalay. Hoosudhaca biyaha ee ka hooseeya qiimaha caadiga ah wixii ka dambeeya guga wuxuu ahaa 13%.
Xagaagan, waxaa jiray qiimeyaal roobab 7% ka sarreeya heerka caadiga ah. Laakiin qiimayaashan ayaan magdhow ka helin cilladda nafaqo-darrada biyaha, gaaraya bisha Sebtember inay noqoto 12%.
Biyo yaraan iyo abaar
Sanad-biyoodka - oo soconaya Oktoobar 1 ilaa Sebtember 30- wuxuu ku xirmay celcelis ahaan 551 litir halkii mitir laba jibbaaran guud ahaan Isbaanishka, taas oo ka dhigan 15% hoos u dhac ah marka loo eego qiimaha caadiga ah (648 litir halkii mitir laba jibbaaran).
Tani waxay sanadkaan ka dhigeysaa mid aad u qalalan. Intaas waxaa sii dheer, baahida loo qabo biyo ayaa sii wadaya inay ahaato mid isku mid ah ama ka badan, marka waxaa yaraanaya biyo yar.
Biyaha waa kheyraad aad u qiimo badan waana inaan baranaa sida loo wada daryeelo, maxaa yeelay ma ogin goorta uu roob kale da'o.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Sannad-biyoodka 2017 wuxuu ku xirmayaa hoos u dhac 15%
Plutocene, ama sida bini'aadamku ugu rogi karo Dhulka meel aan loo dulqaadan karin
Sebtember 2017 ayaa weli ah bil masiibooyin dabiici ah oo waaweyn